सेन्चुरी बैंकको ४०% हकप्रद खुल्यो, कहाँ जाने फारम भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सेन्चुरी बैंकको ४०% हकप्रद खुल्यो, कहाँ जाने फारम भर्न ?
काठमाडौं - सेन्चुरी बैंकले सोमबारदेखि ४०% हकप्रद बिक्री खुला गरेको छ । सेन्चुरीले १०ः४ को अनुपातमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरको १ करोड ८८ लाख ५४ हजार २५७ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । हकप्रद भर्ने अन्तिम म्याद भदौ १८ गते तोकिएको छ । यसमा असार २६ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सेन्चुरीको बिक्री प्रबन्धकको काम सिभिल क्यापिटल मार्केटले गर्दैछ । लगानीकर्ताले सीटीसी मल सुन्धारा स्थित बिक्री प्रबन्धकको कार्यालय र सेन्चुरी बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसहित सम्पूर्ण शाखाबाट यो हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन् । सेन्चुरीको हाल चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । ४०% हकप्रदपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ६० करोड ३० लाख २९ हजार ६९८ रुपैयाँ पुग्नेछ । सेन्चुरीले इन्नोभेटिभ र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वायर गरेर एकीकृत कारोवार पनि सुरु गरिसकेको छ ।